Horudhac: Liverpool vs Watford… (Kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League & Tan ugu hooseysa oo galabta iswajahaya) – Gool FM
Haaruun December 14, 2019
(Liverpool) 14 Dis 2019. Macallin Nigel Pearson ayaa rajeynaynin inuu si adag ku bilowdo noloshiisa Watford marka ay kooxdiisu garoonka Anfield ku booqanayso hoggaamiyeyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool galabta oo Sabti ah.
Reds ayaa isku dayi doonta inay 11-dhibcood ka sare marto Leicester City, waxaana ay ciyaarayaan kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka ka hor ciida gaalada ee Christmas-ka, halka Watford ay ku jirto booska ugu hooseeya horyaalka Premier League, waxaana ay lix dhibcood u jiraan kaalinta nabad-gelyada ee looga badbaado in horyaalka hoos looga dhaco.
Si kastaba ha noqotee, kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League ee Liverpool iyo naadiga ugu hooseysa horyaalka ayaa galabta isku qaban doona garoonka Anfield. ciyaar qeyb ka ah horyaalka xiisaha leh ee English Premier League.
Taariikhda: Sabti, 14 Dis 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 3:30 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Dejan Lovren ayaysan heli karin kooxda Liverpool, waxaana uu la dhibtoonayaa dhaawac ka soo gaaray muruqa kulankii ay habeenkii Arbacada la ciyaareen naadiga Red Bull Salzburg.
Joel Matip ayaa dhaawac jilibka ah kaga maqnaan doona kooxda Reds inta ka harsan sanadkan 2019, halka Fabinho iyo Nathaniel Clyne ay sidoo kale maqan yihiin kulankan.
Dhinaca kale daafaca Craig Dawson ayaa dib u soo laabtay kaddib dhaawac ka gaaray madaxa kulankiisii ugu horreeyey ee uu ka hoos ciyaaray macallin Nigel Pearson.
Taam ahaanshaha Roberto Pereyra iyo Adam Masina ayaa la qiimeyn doonaa, halka Jose Holebas uu isna maqnaan doono.
>- Liverpool ayaa guuleysatay lix ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay wajahday Watford, halka kulanka kale uu ku dhammaaday barbaro, waxaana ay ka dhaliyeen 25 gool, iyadoo la dhaliyey kaliya afar gool kulamadaas.
>- Tan iyo guushii 1-0 ee ahayd guushii ugu horreysay abid horyaalka Premier League oo ay ku garaan garoonka Anfield bishii Agoosto sanadkii 1999-kii, Watford ayaa guuldarro la kulantay shantii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Liverpool booqatay, waxaana isku cel-celis ahaan laga dhaliyey goolal gaaraya 1-20.
>- Saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey Liverpool oo ay gurigeeda kula ciyaartay Watford horyaalka Premier League ayay goolal badan kaga adkaatay, waxaana Reds ay saddexdaas kulan ku kala badisay 6-1, 5-0 iyo 5-0, ma jirto koox abid afar kulan oo xiriir ah hal koox garoonkeeda guul kaga gaartay, isla markaana afartaas kulanba dhalisay shan gool iyo wax ka badan taariikhda kulamada sare ee horyaalka.
>- Kani waa kulankii 35-aad ee taariikhda Premier League kaasoo dhexmara koox horyaalka hoggaaminaysa iyo koox ku jirta boosaska ugu hooseeya ee looga laabto horyaalka, kooxda hoggaanka haysa ayaana 24 ka mid ah kulamadaas adkaatay, lix kulan oo kale barbaro ayay galeen, halka ay afarta kale guuldarro la kulmeen oo waxaa badiyey kooxaha kaalimaha hoose ku jira, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah guuldarrooyinkaas waxa ay soo gaareen Liverpool, waxaana 1-2 uga adkaatay Spurs bishii November ee sanadkii 2008.
>- Kooxda Liverpool ayaa damaanad-qaad u haysata inay ahaan doonto halka ugu sarreeya horyaalka Premier League ciida gaalada ee Christmas-ka, – saddexdii munaasabad ee ugu dambeeyay ee koox ku guuldareysata hanashada horyaal markii ugu sarreysay iyadoo hoggaanka u haysay horyaalka Christmas-ka waa Liverpool (2008-09, 2013-14 iyo 2018-19), kooxda kaliya ee hoggaanka u haysa horyaalka ee ciida Christmas-ka sanado isku xiga oo ku guuleysan waysay labadaas jeerba waxa ay ahayd Everton waana xilli ciyaareedyadii 1894-95 iyo 1895-96.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada sare ee horyaalka kaliya hal jeer ayey kulamo badan oo isku xiga horyaalka ku adkaadeen Anfield taariikhdooda, iyagoo badiyay 21 kulan oo isku xigta intii u dhaxeysay bishii January illaa December sanadkii 1972-kii.
>- Watford ayaa guuldarro la kulantay 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kulammada sare ee horyaalka ku wajahday kooxaha maalintaas ay la ciyaareyso hoggaanka u haya horyaalka.
>- Kooxda Watford ayaa ku guuldarreysatay inay shabaqa soo taabato sagaal kulan oo ka mid ah Premier League xilli ciyaareedkan, halka Liverpool ay tahay kooxda kaliya ee goolal dhalisay dhammaan 16-ka kulan oo ay ciyaareen illaa iyo hadda, waa rikoorkoodii gooldhalinta ugu fiican ee Reds ay ku bilowdeen xilli ciyaareed horyaalka ah tan iyo kal ciyaareedkii 1933-34, markaasoo ay shabaqa soo wada taabtay 21-kii kulan ee ugu horreeyay horyaalka.